Mogadishu Journal » Keita waa nin aan caadi aheyn laakiin Klopp ayaa ku adkeysanaya in ciyaaryahanka khadka dhexe uu weli ku sii jiro qorshihiisa
Jurgen Klopp ayaa cadeeyay in Naby Keita uu wali qeyb ka yahay qorshayaashiisa mustaqbalka fog ee Liverpool, inkastoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu ku adkeysanayo xilli ciyaareed kale oo bilow ah oo kooxda ah.
Dhaawacyada ayaa caqabad ku noqday Keita tan iyo markii uu kaga soo biiray RB Leipzig. Reds ayaa muujisay dulqaad si ay ugu dambayn u hesho mid ka mid ah bartilmaameedyadoodii ugu horreeyay ee suuqa kala iibsiga, iyagoo dhammaystiray heshiis bishii Ogosto 2017 taas oo u aragtay laacibku inuu hal xilli ciyaareed ugu dambeeyay ku qaatay Jarmalka ka hor inta uusan u dhaqaaqin Anfield.
Waxaa jiray dhalaalaya hibadiisa muuqata tan iyo markii uu yimid, laakiin Keita wuxuu umuuqdaa inuu ku xanibmay wareeg jahwareer leh daqiiqado wanaagsan oo xawaare ah oo ay ku xigto inuu kooxda ka maqnaa.
Ololahan waxba kama duwana: Keita ayaa kaliya sagaal kulan ku soo bilaabay tartamada oo dhan, kii ugu dambeeyay ee ay ciyaaraan waxa uu ahaa guuldaradii 3-1 ee Champions League ee ka soo gaadhay Real Madrid taas oo keentay in la badalo xiddiga reer Guinea ka hor wakhtiga nasashada.
“Ma aysan aheyn wax ku saabsan Naby, laakiin waan sameeyay laakiin hada kuma faraxsani arintaas maxaa yeelay waxaan u hadlaynaa sida ay tahay masuuliyada Naby. Ma aheyn. Taatiko ayey aheyd,” Klopp ayaa ka yiri isbadalka.
Tababaraha reer Jarmal ma uusan bilaabin 26 jirkaan tayada leh tan iyo markaas, go'aan uu shaaca ka qaaday ka hor kulanka axada ee ay la ciyaarayaan Manchester United waxaa u sabab ahaa baahida loo qabo xasiloonida xulashada, gaar ahaan kacdoonka daafaca.
Iyadoo Virgil van Dijk, Joe Gomez iyo Joel Matip ay dhamaantood maqan yihiin, waxaa jiray isku shaandheyn kala duwan oo loo adeegsaday wadnaha afarta daafac, oo ay ku jiraan labada khadka dhexe Fabinho iyo Jordan Henderson, kaasoo haatan laftiisa dhaawac ku maqan.
Waxyaabo badan ayaa khiyaano ahaa sanadkaan. Waxay ahayd inaan badalno badiyaa ka dib markaa waa inaad xilligan isku daydo inaad aado xasiloonida, taasi waa waxa aan runtii u baahanahay, ”ayuu Klopp u sheegay suxufiyiinta isagoo ka sii hadlaya safarka Old Trafford. .
“Tusaale ahaan, qaado Manchester United, halkaasoo khadka ugu dambeeya ee daafaca ay wada ciyaarayeen ku dhowaad 20 kulan hada. Kadib waxaad bedel ku sameyn kartaa meel walba maxaa yeelay waxaad leedahay saldhig sax ah.
"Waligeen taas ma aanan helin. Marka taa laga yimaado, in labo ama seddex bedel lagu sameeyo qadka dhexe kaliya ma shaqeyneyso. Dadku waxay dhahaan in la tijaabiyo, waana jeclaan lahaa haddii aan ku dhowaan lahaa oo kaliya in ay shaqeyn doonto, laakiin waxaad u xasiloonida kooxda kubada cagta.
“Kooxaha kale aad ayey kuugufiicantahay inaad sameyso sideed ama sagaal isbedel. Taasi waxay kudhacday ciyaartoy dhowr ah sanadkaan, qaar kamid ah dhaawacyo ayaa soo laabteen.”
Keita ayaa ciyaaray 683 daqiiqo tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan. Waxaa jiray kaliya toddobo horyaal oo la bilaabay, shan ka mid ahna waa laga saaray.
Tijaabadadii coronavirus ee la hubiyay bishii Oktoobar ayaa ku qasabtay inuu go'doomiyo, halka dhaawacyada bowdada iyo jilibka ay ka fogeeyeen kooxda koowaad sidoo kale.